China Paddy Mbeu Kugadzira Chirimwa zviyo zvekuchenesa michina yembeu yekuchenesa tambo vanogadzira uye vatengesi | SYNMEC
Paddy Seed Processing Plant yekuchenesa mbeu michina yekuchenesa mbeu
SYNMEC inopa yakasarudzika yakagadziridzwa kugadzirwa kwembeu yezvikumbiro zvekubereka zvakanyanya mukugadzirwa kwakasiyana siyana. Pa-saiti yekumisikidza uye yepamberi yekudzidziswa sevhisi inowanikwa kune vatengi. Temu yedu yeinjiniya ine ruzivo rwakawanda rwekuisa uye kugadzirisa. SYNMEC chirimwa chekugadzira mbeu chave kuita basa mumakondinendi mashanu.
10T/H Barley Kugadzira Mbeu muAustralia
Muna 2012, Mumwe vatengi veAustralia vanoita odha kubva kufekitari yedu. Anoda kuchenesa bhari, gorosi, mhodzi dzeoat uye ozvitengesa mumarker pakupedzisira. Aive nemuchina wake wekuisa mbeu saka tinomupa mimwe michina.
Uyu mutsara wekuchenesa unosanganisira:
1.5X-12 Yakanaka mbeu yekuchenesa: Cimbria mhando yekuchenesa mbeu inogona kubvisa huruva, kusvibiswa kwechiedza, kuwandisa uye kuderera kwetsvina.
2.5XZ-10 gravity separator: American Oliver type iyo inogona kubvisa zvishoma zvakadyiwa, zvisina kukura, zvipembenene zvakakuvadzwa uye mbeu inorwara
3. DCS-50B bagging machine: Rongedza tsanga nebhegi (10-50 kg pabhegi)
Zvimwe zvikamu: kuchenesa mhepo uye guruva rekubvisa system kunze
Dhizaini Dhizaini yeChirimwa
High quality power control box ine international standard.
4. 5XWT-6 Makobvu separator
6. 5BY-5B Muchina wekupfekedza mbeu
Iyo 5X yakatevedzana Fine Seed Cleaner muchina wepasirese wakanyatsokodzera pre- uye yakanaka kuchenesa marudzi mazhinji akasiyana ezviyo nembeu.
Iyo yakajairwa dhizaini yemuchina inopihwa zvese pre- uye mushure mekuyamwa zvikamu. Chidzitiro chekukurumidza kuchinja kubva ku-pre-kuchenesa kuita kuchenesa kwakanaka nemushandisi inoshandira kukwenenzvera mabasa ekuchenesa. Iyo 5X yakatevedzana mbeu yekuchenesa muchina unokwikwidza zvakanyanya, zvese maererano nemutengo uye huwandu pamwe nekushanda uye kushanda.
Iyo tekinoroji yemuchina inonyatso kuedzwa, iyo inogona kunyorwa neakawanda mareferensi pasirese.
Iine mwero wekuchenesa wakakwira uye inogona kushandiswa zvakanyanya kugadzira gorosi, mupunga, chibage, bhari, pizi uye dzimwe mbeu dzakawanda zvakare inoshandiswa pamhando dzese dzekuchenesa zviyo.
Huwandu hwemhepo hwese 8200 m3
5XZ-10 giravhiti separator inoshandiswa kupatsanura zvigadzirwa zvine musiyano muhuremu chaihwo.
Iyo Gravity Separator ndeyemhando yepamusoro yekuAmerica dhizaini, uye ine 6 indented mute air blower (inowanzo shandiswa muair conditioner), uye mhodzi dzezviyo dzinogonawo kubuda kubva kumagumo kwayo zvakare kubva kudivi rayo.
Zvakapfuura: China Supplier Sorghum Cleaning Line - 5M-2 Mobile Seed Processing Plant – SYNMEC
Zvinotevera: Chirimwa chekuchenesa zviyo nebhinzi
Mbeu Yekuchenesa Line
DCS-S bagging scale system yezviyo mbeu kurongedza b...
5XQS-10 Destoner ye soya bean paddy mupunga sesame ...